वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकाे राष्ट्रिय भेलाले तय गर्याे राजनीति यात्रा | Nepali Outlook
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकाे राष्ट्रिय भेलाले तय गर्याे राजनीति यात्रा स्वतन्त्र नागरिकमा किन राजनीति ? प्रजातन्त्र र हाम्रो आचरण भ्रष्टाचार गर्न छुट, गित गाउन प्रतिबन्ध ? प्रवासबाट बडुवालकाे अाराेप: निर्मला हत्या काण्डका दोषीलाई सरकारले पक्राउ गर्न चाहेन!
Published On: February 24, 2019 || 2075 फाल्गुन 12 आइतबार , at 2:41 AM
विश्वभर- मार्क्सवादी दर्शन अन्तर्गत सर्वहारा-श्रमिकको मुक्तिको आन्दोलन अब उठ्न सक्दैन! कम्युनिस्ट आन्दोलन अब उठ्न सक्दैन भन्ने परेको छ। अब क्रान्ति उठ्न सक्दैन भन्ने निकै लाई लागेकै छ। जसले भौतिकवादी बिचारधारा र सिद्धान्त पक्डेर समाजको उत्पीडन , शोषण र वर्गिय खाडल मेट्ने कुरा गर्छ , संगठित हुने प्रयत्न गर्छ , तिनीहरुलाई पागल भए , गर्न सक्दैनन् , हेरौँला गरेको, आदि इत्यादी पनि भनिरहिएकै छन् । तर हामीले यसै बिच नयाँ शिरा बाट सोच्न थाल्यौँ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बारे नयाँ विश्लेषण अगाडि सार्‍यौँ । हामीलाई छर्लङ्ग ज्ञान छ – यो दलाल पूँजीवाद नफालेसम्म हामीले मनुष्यताको सबै आयाम एन्जोय गर्न पाउदैनौ। हामीले आँट गर्‍यौँ । हो हामीले पागलपन नै देखाउदै छौ। हामीले निर्णय गर्‍यौं – वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्ती को लागि हामी प्रयत्न गर्नेछौ । सक्छौ कि सक्दैनौं ? कति समय लाग्छ? हामीलाई थाहा छैन। तर हामी प्रयत्न गर्नेछौ । गरिरहनेछौ।
हामी माथी ओठ लेप्राउनेहरु छन् ! हामीले त्यो देखि देखि प्रयत्न गरिरहेकै छौ – वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने। हामी निकै अगाडि आइसकेका छौ। यसै क्रममा आज हामी भेला भयौँ । हाम्रो भेला दलित भेला थियो । दलित सङ्ग सम्वन्धित भेला थियो ।
नेपालको वर्ग निर्माणमा अहम् भुमिका जात व्यवस्थाले गरेको छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौ। आर्यखस दलित , मधेसी दलित र नेवारी दलित लाई जातिय भेदभाव र उत्पिडन बाट मुक्त गराउने अभियान , बिचारधारा र कार्यक्रमलाई वर्गिय समस्या कै महत्वपूर्ण कडी बनाउनै पर्छ । जात व्यवस्था बाट उत्पीडित दलितहरुको अग्रणी सहभागीता बिना वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन । हामीले यो कुरालाई गहिरो गरि आत्मसात गरेका छौ।
दलितहरु हाम्रो समाजको प्रथम वैज्ञानिक हुन् ! प्रथम प्राविधिक हुन् । संगितकार हुन् । गायक हुन् । शिल्पकार हुन्। सन्चारकर्मी हुन् । तर तीन हजार वर्ष देखि उनिहरुलाई सामाजिक , साँस्कृतिक , आर्थिक र राजनैतिक रुपमा दबाउदै लेराइयो। शोषण गरियो। अमानव झै व्यवहार गरियो। छुवाछूत गरियो। अब यो जात व्यवस्था को उन्मुलन गर्नै पर्छ । आजको दलित भेलाले पूँजिवादी व्यवस्था भित्र आफ्नो मुक्ती असम्भव भएको निस्कर्ष निकालेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै आफ्नो मुक्तिको लागि अपरिहार्य शर्त हो भनेर एउटा मोर्चा बनाएको छ ! नाम छ – जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा , नेपाल।
वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण को निम्ति बैचारिक , राजनैतिक , संगठनात्मक केन्द्रिय अभियान समिती सदस्यको हैसियतमा यो भेला को साक्षी बस्न पाउनु मेरो जीन्दगी कै गौरवमय क्षण हो। गैरदलित समुदायमा जन्मे हुर्केको म मेरो पुर्खाले गरेको जातिय छुवाछूत , उत्पिडन र शोषणको लागि क्षमायाचना गर्दै जात व्यवस्था उन्मुलन गर्ने अभियान मा सहभागी भैरहनेछु भन्न पाउँदा म बेहद खुसी भैरहेको छु । उत्साहित भैरहेको छु। मोर्चाको कमिटीमा बस्नु हुने सबै कमरेड हरुलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। शुभकामना भन्न चाहन्छु।
संसारका सर्वहारा- श्रमिक हरु एक होऔँ।
1 वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकाे राष्ट्रिय भेलाले तय गर्याे राजनीति यात्रा
2 स्वतन्त्र नागरिकमा किन राजनीति ?
5 प्रवासबाट बडुवालकाे अाराेप: निर्मला हत्या काण्डका दोषीलाई सरकारले पक्राउ गर्न चाहेन!